Waqtiga ugu munaasabsan galmada lamaanaha xiliga Ramadaanka… – Hagaag.com
Waqtiga ugu munaasabsan galmada lamaanaha xiliga Ramadaanka…
Posted on 21 Maajo 2018 by Admin in Lifestyle // 0 Comments
Waqtiga afurka ka dib isku fidinta sariirta ama kursiga iyo dareen diirimaad leh ee bisha Ramadan waxay dhamaantood kiciyaan dareenka galmada ee lamaanaha, wuxuuna ku riixayaa qofka isku day galmo, laakin howsha galmada waxay u baahan tahay dadaal xoog leh dhinaca murqaha iyo neerfayaasha iyo dhiigga oo ku shubma murqaha iyo neerfayaasha, sidaa darteed galmada afurka kadib isla markiiba waxay keeni kartaa dhibaatooyin sida:
dhuujinta dheefshiidka iyo dareen caburnaan ah taasi oo sabab u ah carqaladeynta sida ku meel gaarka ah ee nidaamka dheefshiidka inta ay socoto xiriirka galmada, waxaa caloosha ku kordhaya acidka iyo gaasaska.
2 In Guul laga gaari waayo xiriirka galmada laftiisa oo sabab u ah inuu gaari waayo ama ku shubmi waayo dhiiga xubinta taranka dhinaca ragga.
Sababahan oo dhan waxaa habboon in aan galmo la sameynin waqtiga afurka afka laga qaado kadib, waxaa roon in ugu yaraan muddo labo ilaa seddax saacadood la sugo si aan fursad u siino nidaamka dheefshiidka howshiisa u qabsado, kadibna waxaa fududaanaya xiriirka galmada cabsi iyo dhibaato la’aan. xiriirka galmada Ramadaanka kaama reebayo gudashada cibaadada , waxaa jira waqti kugu filan oo la guta salaada taraawiixda kadib salaada cishaha, kadibna gurigaaga u tagtid inaad seexatid ama galmo sameysid sidii markaasi aad u aragtaan in ay habboon tahay.
Qaar ka mid ah dadka da’da yar iyo dhallinyarada oo firfircoonida aan caadiga aheyn leh ee rabitaanka galmada waqtiga soonka maalintii, taasi oo ku riixeysa inay seegeystaan, waxaa taasi u sabab ah baahida iyo oonka waxay ku firdhinee maskaxda walxo maandooriye ah sida Endorphins iyo qaar ka mid ah Opioids dareemayaasha, maadooyinkan ayaa leh saameyn suuxin, taasi oo ku kaxeyneyso qofka rabitaanka galmada ama qofkiisa ku riixdo qalad inuu galo sidaasina soonkiisa ku burro.
Tani waa habka caadiga ah ee dhinaca nafsiga ah oo dareenka dhalinyarada kiciya waa in laga digtoonaadaa.
Si looga fogaado dhacdooyinkan, waxaa lagu talinayaa cunista saxuur nafaqo leh waqti dambe ee habeenka ama wax yar ka hor waaberiga ama aadaanka si qofku u gaajoon una oomin maalintii oo dhan iyo sidoo kale sameynta jimcsiga ama sports-ka maalintii wuxuu si weyn u yareyaa saameynta Opioids ee qalabka dareemayaasha ee howlaha galmada.